Akshay Kumar, Ajay Devgn Iyo Hritik Roshan Oo Fasax La Gelaya Qoysaskooda & Dalalka Ay Dalxiiska U Aadayaan - Hablaha Media Network
Akshay Kumar, Ajay Devgn Iyo Hritik Roshan Oo Fasax La Gelaya Qoysaskooda & Dalalka Ay Dalxiiska U Aadayaan
HMN:- Waxaa la gaaray xilligii ay inta badan fasaxa geli jireen jillaayaasha caanka ah ee Bollywood, qoysaskooda ayeyna la qataan waqtiyadaan oo kale iyagoo dalxiis la aada, sababtoo ah waxay doonayaan inay waqti lasoo qaataan inta lagu jiro fasaxa Ciidda Kirishtaanka iyo Sannadka Cusub 2017ka.
Liiska atooreyaasha Bollywood ee durba dalxiiska u waday qoyskooda waxaa ugu horreeya Akshay Kumar kaasoo xaaskiisa Twinkle Khanna iyo caruurtiisa Aarav iyo Nitara dalxiis ugu waday dalka South Africa. Waxaana xusid mudan inuu Akky jecel yahay cimilada South Africa iyadoo la xusuusto inuu kusoo qaatay fasixiisii Ciidda Diwali.
Hrithik Roshan ayaa wuxuu isna caruurtiisa Hrehaan, oo 10 sanno jir ah, iyo Hridhaan, oo 8 sanno jir ah, u kexeeyey dalxiis, si ay ugu soo dabaaldegaan Ciidda Kirishtaanka waxayna muujiyeen sida ay u jecel yihiin isboortiga iyagoo aaday gobolka Swiss Alps ee dalka Switzerland.
42 sanno jirkaan ayaa waxaa lagu garanayaa inuu markasta qorshe u dejiyo safarrada caruurtiisa, waxaana lagu soo waramayaa inuu fasax ka qaadan doono xayeysiinta uu u sameynayo filimkiisa Kaabil illaa 2da bisha January si uu waqti ula soo qaato wiilashiisa.
Dhanka kale, Ajay Devgan oo haatan ku sugan Jodhpur halkaasoo uu ku duubayo filimkiisa Baadshaho ayaa wuxuu 22ka bishaan December u duuli doonaa Queen City oo North Carolina ah dalka Mareykanka, isagoo wadi doona xaaskiisa Kajol, gabadhooda Nysa iyo wiilkooda Yug… Illaa 2da January ayuuna fasaxaas ku maqnaan doonaa.
Ugu dambeyntiina, Tusshar Kapoor ayaa wiilkiisa jira lixda bilood ee lagu magacaabo Laksshya wuxuu dalxiis u geyn doonaa Dubai, waxaana halkaas u raaxi doona hooyadiis Shobha iyo asxaab ay isku dhow yihiin.